Guddiga Dib u eegista Dastuurka oo ka cabanaya faragelin lagu ... | Universal Somali TV
Guddiga Dib u eegista Dastuurka oo ka cabanaya faragelin lagu hayo Howshooda.
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah Xoghayaha Guddiga Dib u eegista Dastuurka ee labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ayaa si kulul uga hadlay Faragelin uu sheegay in lagu hayo shaqadii loo Igmaday Guddigooda.
Waxa uu ugu danbeyntii sheegay in Dhibaatooyinka iyo Caqabadaha Guddigooda la soo darsay uu qeyb ka yahay arimo ay eheyd in mar hore xal loo helo oo ka dhashay Shirkii Magaalada Baydhabo ay ku yeesheen Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo kuwa Dowladda Dhexe.
Si Kastaba, Guddigan uu Gudoomiyaha u yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa dhowr jeer oo hore soo bandhigay Caqabado Shaqadooda heysta, iyadoo wali loo dhag raaricin la'yahay.
Kan-xigaGudoomiyaha Golaha Shacabka oo sheega...
Kan-horeQofka ugu da’da weyn Adduunka oo ka...
39,206,440 unique visits